I-ANC igadle ngobuholi obuphezulu kwi-Siyanqoba Rally – LIVE Express
Iqembu elibusayo, i-African National Congress (ANC), ligadle ngezigagayi zalo zabaholi asebemkantsh’ ubomvu ngekathi libambe i-Siyanqoba Rally, nokuwumbuthano wokugcina wokugaya ivoti ngaphambi kokhetho lohulumeni basekhaya mhlaka-3 August 2016.
Lo mcimbi ububanjelwe enkundleni yezemidlalo, i-Ellis Park Stadium, e-Johannesburg, ngeSonto kanti abalandeli baKhongolose bebephume ngobuningi babo ukuzokweseka iqembu.
uMengameli we-ANC, u-Jacob Zuma, uyena othule inkulumo yosuku nalapho ekhethe ukugxila ekukhumbuzeni abantu izinto esezizuzwe yizwe ngaphansi kwahulumeni oholwa yi-ANC.
“iNingizimu Afrika isitshintshile kakhulu eminyakeni embalwa eyedlule ngenxa yomsebenzi onzima wabantu bethu, beholwa yi-ANC. Ngaphambilini, abantu bethu babehlala emalokishini nezigodi ezingcolile, ezinezintuli, futhi iningi lisahlala khona,” kusho uZuma.
Uqhube wathi ngenkathi i-ANC ithatha izintambo ngo-1994 yayingaphezudlwana kancane kuka-50% imizi eyayinamanzi ahlanzekile wathi kodwa namhlanje sebengaphezudlwana kuka-95% abantu asebekwazi ukuthola amanzi ahlanzekile ngamapayipi.
Ubuholi obuphezulu be-ANC obaziwa nge-“top 6” bebuyingxenye yalo mcimbi kanye nabanye abaholi abaphezulu. Lapha kubalwa uMengameli (uZuma), yisekela lakhe (u-Cyril Ramaphosa), uNobhala Jikelele (u-Gwede Mantashe), u-Sekela Nobhala (u-Jessie Duarte), uSihlalo (u-Baleka Mbete) kanye noMgcinimafa Jikelele, u-Dr Zweli Mkhize.
Kuphinde kwaba nenkulu inhlokomo kubantu ababehambele lo mcimbi ngenkathi kutheleka omunye womakadebona be-ANC, u-Winnie Madikizela-Mandela, nowayengunkosikazi walowo owaba nguMengameli wokuqala ngaphansi kwentando yeningi futhi owayenguMengameli we-ANC, u-Dr Nelson Mandela, ongasekho.
Phakathi kwabanye babaholi abaphezulu ababonakele kubalwa u-Nomvula Mokonyane, u-Paul Mashatile (uSihlalo we-ANC e-Gauteng), uNathi Mthethwa, uMalusi Gigaba, uFikile Mbalula, u-Naledi Pandor, u-Jeff Radebe, u-Lindiwe Sisulu kanye no-Dr Blade Nzimande – onguNobhala Jikelele we-South African Communist Party (SACP).